एटलेटिको छाड्दै ग्रीजम्यान, अबको गन्तव्य कता ? – Khel Dainik
एटलेटिको छाड्दै ग्रीजम्यान, अबको गन्तव्य कता ?
एजेन्सी । पाँच बर्षको लामो बसाई पश्चात स्पेनीस क्लब एटलेटिको मेड्रिडका स्ट्राइकर एन्टोइन ग्रीजम्यानले क्लब छाड्ने घोषणा गरेका छन् । गत जुनमा पाँच बर्षको नयाँ सम्झौता गरे तापनि शनिबार ला लिगातर्फ लेभान्टे विरुद्धको खेल ग्रीजम्यानका लागि एटलेटिकोको जर्सीमा अन्तिम खेल हुनेछ ।
यो एउटा अविश्मरणीय क्षण थियो । सबै कुराहरुको लागि धन्यवाद । एटलेटिको छोड्ने घोषणा गरेका ग्रिजम्यानले भनेका छन् । एटलेटिको छोडेसँगै ग्रीजम्यान फ्रि एजेन्ट हुनेछन् । रिपोर्टअनुसार ग्रीजम्यानका लागि बायआउट क्लजसहित बार्सिलोनाले १२० मिलियन युरो तिर्न तयार छ ।
Antoine Griezmann has announced he will be leaving Atletico Madrid at the end of the season https://t.co/N08d7toXZo pic.twitter.com/qErMcWQrAp
रियल सोसिडाडबाट सन् २०१४ मा एटलेटिकोमा आवद्ध भएका ग्रीजम्यानले क्लबका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २५६ खेलमा १३३ गोल समेत गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले युरोपा लिग, स्पेनीस सुपर कप, यइएफए सुपर कपको उपाधि पनि जितेका थिए ।
यस सिजन एटलेटिको छोड्ने ग्रीजम्यान तेस्रो मुख्य खेलाडी हुन् । यसअघि लुकास हर्नान्डेज र डिएगो गोडिनले पनि क्लब छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
← जोकोभिचलाई तेस्रोपटक मेड्रिड ओपनको उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मै पहिलोपटक महिला म्याच रेफ्री नियुक्त →
थापामाथि एन्फाको कारवाही जेष्ठ १, २०७६
समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण जेष्ठ १, २०७६
पूर्व एपिएफ प्रशिक्षक राईद्वारा छोरीको उपचारका लागि अपिल जेष्ठ १, २०७६
दृष्टिविहिनलाई आयशाको सहयोग जेष्ठ १, २०७६
कीर्तिमानी रजत विजेता राजभण्डारीको सहयोग जेष्ठ १, २०७६
चाइनाक्वार्टर एफसीको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न जेष्ठ १, २०७६